Ciidamo Ajnabi ah oo Qarax is-miidaamin ah lagu weerarray Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirro) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ciidamo Ajnabi ah oo Qarax is-miidaamin ah lagu weerarray Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirro)
Qarax loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyey Fahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa weerar Qarax lala beegsaday ciidamo ka tiran mlateriga Midwoga Yurub ee taageera dowlada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Talyaaniga.
Ciidamadan ayaa la sheegay inuu qaraxu ku haleelay agagaarka Xarunta wasaaradda Gaashaandhigga magaalada Muqdish , waxaana jugta qaraxa laga maqlay daafaha magaalada, waxaa lasoo weriyey inuu qasaare soo gaaray kolonyada iyo ciidamadii Talyaaniga ee la beegsaday.
Sawirro laga helay qaraxa ayaa muujinaya in qaraxu ahaa mid xoog leh oo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa is-miidaamin loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Ma jiro war kasoo baxay dowladda Soomaaliya iyo dhinaca Talyaaniga.
Kooxda Alshabaab ayaa sheegatay inay ka dambeysay qaraxa.
Puntland oo shaacisay bandhigtay liiska xubnaha Ku matalaya Guddiyada doorashada iyo Khilaafaadka.